Ogaden News Agency (ONA) – Booliiska Ruushka oo u Dhacay Xafiisyada Hogaamiyaha Mucaaradka.
Booliiska Ruushka oo u Dhacay Xafiisyada Hogaamiyaha Mucaaradka.
Posted by ONA Admin	/ January 29, 2018
Booliiska dalka Ruushka ayaa waxay u dhaceen xafiisyada hogaamiyaha mucaaradka Ruusha Alexei Navalny ka hor dibadbaxyo lagu wado in dalkaasi ay ka dhacaan kuwaasi oo lagu taageerayo qaadacaada doorashada.
Sawiro la soo dhigay barta uu YouTube ku leeyahay hogaamiyahani ayaa muujinaya askarta oo galaysa goob istuudiya ah islamarkana shaqaalaha su’aalo waydiinaya. Mr Navalny ayaa ku baaqay dibadbaxyo shalay oo Axad ahayd kuwaasi oo looga soo horjeedo doorashada madaxwaynanimada dalkaasi.
Hogaamiyahani mucaaradka Ruushka ugu wayn Alexei Navalny ayaa ahaa ninka kali ah ee loo arkayay in uu tartan adag la gali karo madaxwayne Putin. Afhayeen u hadlay Mr Navalny ayaa sheegay in askarta ay bir awood badan u adeegsadeen jabinta xafiiska, ayna u sheegeen in ay baadhayaan bambaano.
Dhacdadani ayaa ku soo beegmaysa xilli lagu waday in dibadbaxyo ay ka dhacaan dalkaasi kuwaasi oo looga soo horjeedo doorashada. Doorashada madaxwaynanimada dalka Ruushka ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 18 bisha march ee soo socota.